13 Zvinhu Zvokutarisira Sezvo Hukama Hwako Huchipfuura 3 Mwedzi - Ukama
13 Zvinhu Zvokutarisira Sezvo Hukama Hwako Huchipfuura 3 Mwedzi
Kana uchangobva kurova, kana kuti wave kuda kurova, iyo 3-mwedzi mucherechedzo muhukama hwako, zvakasikwa kuti unzwe kakutya.
Isu tese tanzwa nezve iyo 3-mwedzi itch, asi usazvidya moyo - hukama hwako huri kure nekuparadzwa! Chokwadi, zvinhu zvishoma zvinogona kuchinja, asi izvo hazvisi hazvo zvakaipa.
Hezvino zvinhu gumi nezvitatu zvekutarisira nekutarisira paunoyambuka mwero wemwedzi mitatu nemumwe wako.
1. Inongoerekana yanzwa chaiyo.
Zvinogona kutanga kunyura mune kuti iwe unonyatsoenderana nemumwe munhu! Mwedzi mishoma yekutanga yehukama inogona kuenda nekukasira, uye hazvisi kusvika iwe wasvika padanho rekupedzisira kuti iwe uone kuti wave nenguva yakareba sei muri pamwe chete.
2. Unokakavara kana kupopotedzana.
Paunowedzera kujairana uye nekurega varindi vako pasi, zvinowanzoita kuti iwe upopotedzane.
Izvi zvinowanzoitika - mushure mezvose, iwe unokakavara neshamwari dzako dzepedyo uye mhuri! Icho chiratidzo chekuti munogadzikana nemumwe.
Iwe unoziva kuti imi vaviri munodanana, saka kukakavara kudiki pamusoro pechinhu chisina musoro hakusi kuzunungusa chikepe. Iwe uri padanho pausingachade kutya kuti chimwe chinhu chidiki chiri kuzovasundira kure!
Zvakajairika kuva nechidimbu-chekuzvipira-chakanangana ne freakout paunorova iyo 3-mwedzi mucherechedzo.
Icho chiyeuchidzo chekuti iwe uri muhukama, uye kunyangwe iwe uchida sei mumwe munhu, unogona kungoerekana waitika inzwa kubatwa zvishoma kana kunetseka, kutoshamisika kana uchifanira kupedza zvinhu uye kufambidzana nevamwe vanhu.
Izvi zvinowanzo kuve kuvhunduka kupfupi kune vanhu vazhinji, uye zvakajairika kunzwa nenzira iyi. Kana zvikagara mupfungwa dzako zvakanyanya uye wotanga kunyatsotsvaga kwekutiza, ungangoda kufunga zvakakomba nezve manzwiro aunoita!
murume akaroora anondida here
4. Iwe unonzwa kuswedera kupfuura nakare kose.
Ehezve, kana zvinhu zviri kufamba mushe, chisungo chako chingangove chiri chakasimba kwazvo izvozvi.
Iwe une mwedzi mitatu, saka ungangove uri kushandisa yakawanda nguva yakawanda pamwe chete uye imi mose muchave muchitamba hombe mabasa muhupenyu hwemumwe nemumwe.
Iwe unobatanidzwa mune zvakawanda zvakawanda uye ronga nguva yako kutenderedza mumwe nemumwe kupfuura zvawaimboita kare!
5. Unogona kupedzisira wazorora.
Uku kubatsirwa kukuru kwekurova mwedzi mitatu muhukama hwako. Hapasisina mitambo, hapachina kunetseka kuti sei vasiri kupindura yako chinyorwa pakarepo. Imi mose zviri pachena kuti munodanana uye munogona kuzorora muchiziva kuti mese muri papeji imwe chete.
6. Chokwadi chenyu chinobuda.
Izvi zvinogona kuva chikomborero nekutukwa!
Vanhu vazhinji vari pahunhu hwavo hwakanaka pavanotanga kufambidzana nemumwe munhu. Ivo vanoda kuita inoyevedza saka ivo kuti vashande nesimba, chengetedza imba yavo yakanaka uye yakachena kuitira paunouya pamusoro, uye uve neakanaka tafura tsika.
Sezvo nguva dzinoenderera, iwe unowedzera kugadzikana nemumwe - uye hunhu hwakanakisa hungatanga kutsvedza.
Unogona kucherechedza tsika dzinogumbura dzavakachengeta dzakavanzika, kana ivo vangakuudza zvinhu zvavaisada kuti iwe uzive kare!
Kunyangwe zvingave zvichityisa, uye zvichitovhiringidza, kuti uone kuti wako waakamboita pristine mudiwa chaiko iri hombe slob, edza kuzviona sechakanaka kuti ivo vanonzwa vakasununguka uye vakachengeteka zvakakwana kuti vanyatsoita, zvechokwadi kuva ivo vakakukomberedza.
7. Unogona kudonhedza iwo madiki matatu mazwi.
Kana usati watove, iwe unogona ikozvino kufunga nezve kuti 'ndinokuda' pa3-mwedzi yemakaro chiratidzo.
Ehezve, hukama hwese hunofamba nenzira yayo uye haufanire kumhanyira mune chero chinhu chausingafarire nacho.
Izvo zvataurwa, vanhu vazhinji vanonzwa sekunge vagara pamwe kwemwedzi mishoma, vanoziva mumwe munhu zvakanaka zvakakwana kuti ataure iwo matatu mazwi - uye ivo vanokuziva iwe zvakakwana zvakakwana kuti uzive mhinduro yako ichave ...
8. Muri vaviri-zvizere zvino.
Iwe unozotanga kuona iwe unoshandisa mazwi ekuti 'isu' uye 'isu' nguva dzese izvozvi! Iwe uri murume nemukadzi vakakodzera uye munoita zvakawanda pamwe chete - vanhu vanokuzivai semurume nemukadzi, munotandara nedzimwe shamwari dzevakaroora uye uri kuzara pa 'isu'!
9. Hupenyu hwako hwepabonde hunochinja.
Izvi zvakajairika uye hazvifanirwe kuve chero chikonzero chekufunganya. Paunenge uchinge wakasununguka nemumwe wako uye muchigara muchipedza nguva muri pamwe chete, mumwe kana imi mose munogona kudonha zvishoma maererano ne libido.
Izvi zvinogona kuve nekuti ivo vane chivimbo chekuti ivo vachazogara vachiita bonde saka havachanzwi kudiwa kwekuzviita pese pavanowana mukana!
Zvinogona zvakare kuve nekuda kwekuti iwe unonyatso gadzikana nemumwe uye unogona kunakirwa nekungotandara, pane mazuva ekutanga ekufambidzana uko bonde yaive nzira yekuratidza manzwiro ako usati wanyatsogona kuakurukura!
10. Kudanana kunodzikira.
Zvekare, ichi chingori chinhu chinowanzoitika kana vaviri vakaroorana vagadzikana. Iwe unoziva kuti iwe uchave neyakanaka nguva uchingotonhora pasofa pamwe chete, saka iwe unonyatsoda here kuita nhamburiko huru uye kubuda zvese neanoshamisira nzvimbo yekudyira?
Paunonyanya kunakidzwa chete kuva pamwe nemumwe, kushoma kwekuita iwe kwaunonzwa kuda kwekuita.
Ehezve, zvakanaka kana iwe uchiri kuda kuita kuti mumwe nemumwe anzwe kuwina uye kudya, uye kuita kuti mumwe nemumwe anzwe akakosha uye anodikanwa, asi usatya kana iwe ukangoerekana uri pasofa mumateya ako uchidya pizza uye uchitaura zvisina maturo zvisina musoro !
11. Hupenyu hwako hwakawedzera kubatana.
Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti iwe unoshandisa yakawanda nguva semurume nemukadzi neshamwari kupfuura zvamaimboita.
Paunotanga kufambidzana, uri kuedza kufunga kuti mungakwanirane sei muhupenyu hwemumwe nemumwe. Kana iwe uchirova iyo 3-mwedzi mucherechedzo, iwe ungangove wakasangana neshamwari dzavo uye pamwe kunyangwe mhuri, iwe waona kuti ndezvipi zvekuzvivaraidza iwe zvaunogona kugovana nemumwe nemumwe uye hupenyu hwako hunosanganisa zvakawanda.
12. Unorega chengetedzo yako pasi.
Paunenge wave nemudikani wako kwemwedzi mitatu, munozivana zvakanaka. Saka nekudaro, iwe unokwanisa kurega kurinda kwako pasi, kugovana zvaunonzwa, uye kuvhura pamusoro pezvinhu zvakakosha kwauri.
Izvi zvinogona kubatsira kusimbisa hukama hwako uye zvinobatsira mumwe wako kuvhura kwauri zvakare zvakare.
Iwe uchazviwana iwe uchigovana zvakadzama manzwiro, zvakavanzika, uye kusagadzikana apo iwe paunoswedera padhuze.
13. Yako yemusango dzimwe dzinobuda.
Iye zvino zvamuri mese makajairana kukambani yemumwe nemumwe, mativi ako akapusa anotanga kubuda!
Iyi inhanho inonakidza yehukama uye chimwe chinhu chakakosha kugovana nemunhu waunoda.
Iwe unomira kunzwa sekuti iwe unofanirwa kuve 'wakakwana,' iwe hausisiri kunzwa kunyara kana kunyara nezve ako quirks, uye iwe unogona kunyatsorega yako isinganzwisisike mureza kubhururuka!
Nekudaro, pane zvese zvawakaverenga nezve 'mwedzi mitatu yekutuka kwehukama,' rangarira kuti kune zvimwe zvakawanda zvinoshamisa zvinhu zvinouya kubva mukusvika padanho iri nemumwe munhu.
Iwe unonyatsotanga kusvika pakuziva mumwe munhu kana mave muri pamwe kwenguva yakareba iyi uye iwe unogona kugovana zvakanyanya zvakanyanya navo.
kugamuchira mumwe munhu zvaari
Kana iwe uri kushamisika kana iko kuchinja kwehukama hwako kuri kwakajairika kana kwakanaka, zviri! Zvinhu zvinowanzo shanduka sekufamba kwenguva, uye chero bedzi imi mose muchifara pane zvese, muchigamuchira.
Heano mamwe akawanda ehukama hwehukama…
Une mibvunzo kana unoda zano nezvehukama hwako huri kutumbuka? Taura zvepamhepo kune hukama hukama kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kuti uone zvinhu. Simply.
5 Zvikonzero Nei Ukama Hukahadzika Zvakanakisa Zvakajairika
7 Matipi Ekuve Iyo 'Iri Kuenda Kupi?' Hukama Kutaura NeMukomana
Ndeipi Nguva Yakakodzera Yekuti 'Ndinokuda' Kune Wako Mumwe?
9 Nzira Dzakanaka Dzokupindura Kuna 'Ndinokuda' - Zvekutaura Kudzoka
9 Nzira dzeKunonoka Zvinhu Pasi Muhukama Izvo Zviri Kufamba Zvikurumidza
zvekuita kana uchidemba kuputsa mumwe munhu
kubata nekudzora vabereki mukukura
zviratidzo zvehukama humwe chete
zvekuita kumba kana wabhowekana
ndinonzwa sei chaizvo nezvake
chii icho munhu mumwe angaite kushandura nyika